FBC - Pireezdaantiin Yunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp jeequmsa taphaa irratti taatota ‘industirichaa’ waliin mari’achuuf jedhu
Pireezdaantiin Yunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp jeequmsa taphaa irratti taatota ‘industirichaa’ waliin mari’achuuf jedhu
Finfinnee, Gurraandhala 29, 2010 (FBC) Pireezdaantiin Yunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp bakka-buutota kaampaanii tapha viidiyoo waliin qabiyyeewwan tapha viidiyoo jeequmsa kakaasuu danda’an irratti mari’achuuf jedhu.
Mariin kun geggeffamuuf kan yaadame ji’a darbe mana-barnootaa Filooridaa keessatti namoonnni 17 ajjeeffamuusaanii boodadha.
Pireezdaantichi kana dura taphoonni jeequmsa kakaasan viidiyoo haala itti ijoolleen yaaddu jijjiiraa akka jiran ibsaniiru. Haata’u malee, ‘industirichi’ kana falmuun jeequmsa taphootni viidiyoo qabanii fi dalaga jeequmsaa jireenyaa gidduu hariiroon akka hin-jirre himu.
Waldaan Sooftweerii Elektiroonikii (ESA) Yunaayitid Isteets keessatti industirii taphaa bakka bu’u marii kana irratti akka hirmaatu beeksiseera.
Mariin Waayit Haawusitti geggeffamu kun waa’ee tapha viidiyoo, maatii waliin hojjachuuf kutannoo ‘industirichi’ qabu, filannoowwan sirrii fudhachuuf meeshaalee dhiheessan irratti mari’achuuuf carraa akka uumu ibsa baase kanaan eereera.
Kana malees, taphaaf umurii fi qabiyyeerratti gorsa kan kennu ‘Entertainment Software Rating board’ irratti argama jedhameera.
Waa’ee marichaa Waayit Haawusiin qabxiileen ibsaa kemnnaman muraasa ta’anis, Barreessituun Sab-quunnamtii Saaraah Sandars akka jedhanitti jeequmsi tapha viidiyoonii dhimma xiyyeeffannoon itti kennamee ilaalamuu qabuu fi irratti mari’achuu qabanidha.
Saandars walga’iin kun akka geggeffamu torban darbe ture kan beeksisan-kun ammoo namoota industiricha keessaa wayita sanatti yaada isaa hin-dhageenyetti oduu tasaa itti ta’eera.
Gabaasi Waashingtan Post irraa tokko dhaabbileen industiricha keessaa (game developers) muraasni kan akka ‘Take Two Interactive’ – abbaa “Grand Theft Auto’ akka irratti hirmaataniif afeeramaniiru. Kaampaanichi garuu walga’ii kana irratti akka yaada kennuuf ‘BBC’n gaafatamee deebii hin kennine.
Gabaasi Post kun akka eeretti qeeqxonni ‘industirii’ taphaa ijoonis marii kana irratti ni-argamu, hundeessaa ‘Parents Television Council’ Brent Bozelfaa dabalatee.
Bozel irra deddeebi’uun jeequmsi tapha keessaa (violence in games) akka hir’atu gaafataa turaniiru.
Oduuwwan Biroo « Googl raayyaa ittisaa Ameerikaa waliin hojjechaa jira	Saamsang televiizhinii akka gaararraa bifa geeddaratu gabaarra oolchufi »